10pcs Qalabaynta Mastaraha Qalabka Rushfiirinta Nadiifinta Qalabka Mashiinka Cusub - Suuq Xashiishka - shoppingdirect24.com - SD24
Home > 10pcs Qalabaynta Mastaraha Nadiifinta Mashiinka Burushka Qalinjabinta Qalabka Cadaadiska
10pcs Qalabaynta Mastaraha Nadiifinta Mashiinka Burushka Qalinjabinta Qalabka Cadaadiska
qiimaha sale € 18,50 qiimaha joogtada ah € 35,00
Black - € 18,50 EUR Buluug - € 18,50 EUR iyo guduud - € 21,50 EUR Red - € 21,50 EUR Marble - € 25,50 EUR
shoppingdirect24.com --- waxay doorteen luuqadaada iyo lacagtaada --- Ka eeg alaabta la soo xulay oo ku saabsan ETSY.COM: http://lnk.direct/7tz8 --- maraakiibta bilaashka ah ee adduunka oo dhan laga helo kaliya qiimaha 25 EURO. --- Isticmaal farsameynta zoom / lens si aad u aragto faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sawirada sawirada. Isticmaalay Qaybaha & Qalabka
Nambarka Muuqaalka Mashruuca Qalabka qurxinta
Cabbirka 15.5 * 12 * 1.2 cm
Qalabka Maaddada Sunta
Nambarka: buraashka qurxinta Size: 15.5 * 12 * 1.2 cm Xusuusin:
Sababtoo ah sababaha sida muuqaalka pixel, sidaa darteed waxaa jiri kara farqi yar oo midab leh.
Sababtoo ah hababka kala duwan ee cabbirka, waxaa jiri kara 1-3cm ee qaladka loo ogol yahay.
Qalabka: 10 gabal gaboobay
saliidda jojoba 50ml 100% Saliida Saldhigga ah ee Saldhigga Daryeelka Jirka ee Saliidda Daawada Jidhka
qiimaha sale € 26,50 qiimaha joogtada ah € 42,00 Sale
Qaado jimicsigaaga qurxinta leh ee burushka tayada leh. Qalabkan 11-gabalkiisu wuxuu u eg yahay mid adag.
qiimaha sale € 24,50 qiimaha joogtada ah € 41,00 Sale
5pcs Pro Qalabka quruxda leh ee quruxda leh ee quruxda badan leh
qiimaha sale € 11,50 qiimaha joogtada ah € 12,00 Sale